Shaqaaqo dhul oo ka dhacday Cabudwaaq iyo 18 boolis ah oo lagu dhaawacay degmada (Dhegeyso) – Radio Daljir
Luulyo 29, 2013 3:35 b 0
Cabudwaaq, July 29, 2013 – Degmada Cabudwaaq ee gobolka Galguduud waxaa maanta ka aloosan xiisad u dhexeysa dadka degan gudaha magaalada oo isku haysta dhul deegaan ah, waxaana khasaare baxaad leh ka dhashay dhex-dhexaadintii labbada dhinac.
Wararka ka imanaya Cabudwaaq waxay sheegayaan in ay dhaawacmeen 18 Askari oo ka tirsan booliska degmada ee Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaasi oo lala beegsaday rasaas kala duwan, kadib markii ay tageen dhul laysku haystay oo ku yaala gudaha magaalada.
? Muhiimadu waxay ahayd in boolisku ay xaalada dejiyaan, laakiin Askartii ayaa la laayey oo rasaas lala beegsaday, waxaana loo arkay garab saddexaad oo meesha soo galay oo cid khaas ah taageeraya? ayuu yiri Gacal Cali.
Dhaawaca soo gaaray askarta dowladda ee dhex-dhexaadinta u tegey dhulka la isku haystay ayaa wararku sheegayaan in ay yihiin dhaawacyo fudud intooda badan, balse waxaa jira qaar ka mid ah booliska oo dhaawacoodu culus yahay.
Maamulka dowladda Federaalka ah ee degmada ayaa arrinta walaac ka muujiyey, Gudoomiye ku xigeenka degmada Caabduwaaq Gacal cali jabiin ayaa sheegay in loo baahan yahay in bulshadu ka hortagaan falalka noocaasi oo kale ah, wuxuuna baaq u diray odoyaasha deegaanka Cabudwaaq, si xaalada guud loo qaboojiyo.
Qaar ka mid ah dhaawacyada Askarta booliska ah ayaa haatan loo soo qaaday dhinaca magaalada Galkacayo ee xaruunta gobolka Mudug, halkaasi oo lagu dabiibayo sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka degmada Cabudwaaq.
Halkan ka Dhegeyso war-bixinta arinta Cabudwaaq Bashiir Nadaara